IHarvard Square (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Harvard Yard yintliziyo yeYunivesithi yaseHarvard , enye yeZikolo ezisibhozo ze- Ivy League . Yakhelwe ngo-1718, eyenza ibe yinxalenye enkulu kunayunivesithi. Ididi iyindlu kwikweshumi elinesibhozo e-freshman dormitories, kunye neelayibrari ezine.
Eyona ndawo kwiHardard Yard kwaye echazwe ngasentla, iHarvard Square yimbindi yembali yaseCambridge, eMassachusetts. Isikwere sisebenza njengeziko lesorhwebo kubafundi abanezitolo zokugqoka, ivenkile zekhofi kunye ne-bookstore enkulu yeHarvard.
Isitampu sikaJohn Harvard kwiYunivesithi yaseHarvard
Isitampu sikaJohn Harvard (nqakraza umfanekiso ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Isifanekiso sesibhakabhaka sikaJohn Harvard, umsunguli weHarvard, ngenye yezona zixhobo zobugcisa kakhulu esikolweni. Yadalwa ngowe-1884 nguDaniel Chester isiFrentshi, isakhiwo senziwe ngaphandle kweeofisi zaseHunivesithi zeDyuni yaseHarvard. Isithombeni sihlala kwi-crranth ezintandathu. Ngakwesokudla yinkcazo kaJohn Harvard's alma mater: IYunivesithi yaseCambridge ka-Emmanuel College. Ngasekhohlo ziincwadi ezintathu ezivulekileyo ezimele i-veritas yaseHarvard.
Akukho mntu wayesazi ukuba uJohn Harvard wayebukeka njani ngexesha eliqingqiweyo laqala, ngoko umfundi waseHarvard ogama linguSherman Hoar, owayevela kwintsapho ende eNew England, wenza umzekelo wesithokiso.
Kuye yinto yokugubha unyawo lukaJohn Harvard ngenhlanhla. Ngoko ngelixa isiqingqiweyo, ngokubanzi, sihlangene, unyawo luhlala lukhanya.
IWaterener Library kwiHarvard
I-Widener Library kwiHarvard (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Harry Elkins Widener Memorial Library yiLebhuari yeprayibrari yeprayimari kwi-system eyi-15.6 yezigidi zeeprogram, eyona nto iyona ndlela iphakamileyo yelayibrari enkulu kwiyunivesithi: Ilayibrari yakhiwa njengesipho esivela ku-Eleanor Elkins Widener nokuzinikezela kwonyana wayo. Ilayibrari ihlala kwiCawa yeSikhumbuzo kwiTercentenary Theater. Isakhiwo savulwa ngowe-1915, kwaye namhlanje sinezigidi ezili-57 zeencwadi zeencwadi kunye nezigidi eziyi-3.
Phakathi kuka-1997 no-2004, ilayibrari yaba nomsebenzi omkhulu wokulungiswa kwenkqubo eyayifake inkqubo entsha yokumelana nomoya, incwadi entsha kunye neendawo zokufunda, inkqubo entsha yokunciphisa umlilo, kunye nenkqubo yokukhusela entsha.
ICawa yeSikhumbuzo kwiYunivesithi yaseHarvard
ICawa yeSikhumbuzo eHarvard (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Eyakhelwe ngo-1932, iCawa yeSikhumbuzo ivela kwiThala leWallener kwiTercentenary Theatre, indawo enkulu ebomileyo eHarvard Yard. Icawa yakhiwa ngokuhlonipha amadoda nabesifazane baseHarvard abalahlekelwa ubomi babo kwiMfazwe Yehlabathi I, kwaye amagama angama-373 alumni aqoshwe kwisifanekiso esibizwa ngokuthi Isibingelelo nguMalvina Hoffman. Umfanekiso wawunikezelwa ngoSuku lwe-Armistice, ngoNovemba 11, 1932. Isakhiwo sibuye sikhumbule i-Harvard alum elalilahlekelwe ubomi babo kwiMfazwe Yehlabathi II, iMfazwe yaseKorea, kunye neMfazwe yaseVietnam. Ngeenkonzo zangeCawa, icawa inomculo we-choral yi-Harvard University Choir.
I-Tercentenary Theater kwiYunivesithi yaseHarvard
I-Tercentenary Theater eHarvard (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Kwinqanaba leHarvard Yard yiTercentenary Theater, indawo ebanzi ebomileyo equlunqwe yiCawa yeSikhumbuzo kunye neWallener Library. Ukuqaliswa kubanjwe kwibala lemidlalo ngonyaka.
IThala leLamont kwiYunivesithi yaseHarvard
I-Library yeLamont eHarvard (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Ekhompuma-mpuma-ntshona yeHarvard Yard, iLatta yeThala leLayibrari yincwadi yokuqala eyadala abafundi be-graduate. Kwakhona kwadalwa ukukhupha ezinye zeengcinezelo ezisetyenziswe kakhulu kwiWaterener Library. Ilayibrari yakhiwe ngo-1949 ngenhlonipho kaHarvard Alumnus uTom. Thomas Lam Lam, oyibhanki eyaziwayo yaseMerika. Namhlanje, likhaya kwiikholeji eziphambili zekharityhulam ye-graduate kubuntu kunye nezesayensi zentlalo.
U-Emerson Hall kwiYunivesithi yaseHarvard
U-Emerson Hall eHarvard (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Phakathi kweSever Hall kunye neLoeb House, u-Emerson Hall uyisekhaya leHarvard kwiSebe lefilosofi. Isakhiwo sasibizwa ngokuba yi-Harvard alumnus, uRalph Waldo Emerson, kwaye yayilwe nguGuy Lowell ngo-1900. U-Emerson Hall ubambelela ngaphezu komnyango walo omkhulu: "Uyintoni na umntu ukuba uyamkhumbula?" (INdumiso 8: 4).
Dudley House (Lehman Hall) kwiYunivesithi yaseHarvard
Dudley House eHarvard (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Dudley House yenye yezindlu ezilishumi elinesithathu ekufundiseni iHarvard campus. Indlu ngokuyinhloko isebenza ngabafundi besikolo esiphantsi kwezikolo ezingahlali kwiindawo zokuhlala zendawo yokuhlala ukuze banxulumane namathuba entlalo, kwenkcubeko kunye nokutya kwi-campus. Isakhiwo sinobumba lwekhompyutheni kwisiseko, kunye nomgangatho wesithathu unendawo yokudlala kunye neTV, i-ping pong itafile, itafile yebhotile kunye netafile ye-hockey emoyeni. Umgangatho wesibini uhlala kwikamelo eliqhelekileyo, elineipianos kunye nezinye izixhobo zomculo ezikhoyo. I-Dudley House nayo ineendlela ezimbalwa zokutya, kuquka iKafé Gato Rojo kunye neDudley Café.
Library yaseHorton kwiYunivesithi yaseHarvard
I-Horton Library kwiHarvard (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Library yaseHorton yakhiwa ngo-1942, kwaye yiyona ndawo yokugcina iincwadi zeNarvard ezinqabileyo kunye nemibhalo yesandla. Ithala leencwadi lifumaneka kwicala lasezantsi leHarvard Yard phakathi kwe-Widener Library kunye neLatont Library. Ekuqaleni, iikholeji ezikhethekileyo zeHarvard zazifumaneka kwiCandelo loNondyebo lweThala leNcwadi yoLwabiwo, kodwa ngowe-1938, uHarvard Librarian Keyes Metcalf wacebisa ukuba kwakhiwa ithala leencwadi ekhethekileyo kwiincwadi zeNarvard ezingabonakaliyo. Namhlanje, uHoffon ubamba iikholeji ngu-Emily Dickinson, uRalph Waldo Emerson, uTheodore Roosevelt kunye no-EE Cummings ukubiza ngambalwa.
I-Sever Hall eYunivesithi yaseHarvard
I-Sever Hall eHarvard (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Eyakhelwe ngo-1878, i-Sever Hall ihlala kwinqanaba leyunivesithi yoluntu. Isakhiwo sakhiwe ngumakhi owaziwayo uHH Richardson kwaye ngoku i-National Historic Landmark. Isakhiwo sakhiwe kwisitayela esaziwa ngokuba yiRichardsonian Romanesque, okwenza kube esinye sezakhiwo ezahlukileyo kwiHarvard Yard. I-Sever ineeholo ezinkulu zeeprogram, amaziko okufundela amancinane, kunye neefisi ezimbalwa, iimpawu ezenza kube yindawo efanelekileyo kwisebe labantu, ukuqala izifundo zeelwimi kunye nezinye iiklasi zeHarvard Extension School.
UMathews Hall eHyunivesithi yaseHarvard
UM Matthews Hall eHarvard (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Eentliziyweni zeHarvard Yard, uMathews Hall ungomnye wabantu abalishumi elinesixhenxe abahlala kwiindawo zokuhlala. Eyakhelwe ngo-1872, uMathews Hall unamacandelo angama-suite aneendawo ezimbini zokuhlala kunye neendawo zokuhlambela. Isakhiwo sinekhaya lokuhlala kwindawo ephantsi ebonisa indawo yokufunda, ikhitshi kunye negumbi lomculo. Iidolo ezijikelezayo ziquka i-Straus Hall ne-Massachusetts Hall, indawo yokudala ehlala kuyo. Abalume abadumileyo njengoMat Damon noRandolph Hearst obizwa ngokuba yi-Matthews Hall ekhaya ngexesha labo abatsha.
ILoeb House kwiYunivesithi yaseHarvard
I-Loeb House eHarvard (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Eyakhiwe ngo-1912, iLoeb House yindlu kwiiofisi zebhodi elilawulayo likaHarvard. ILoeb House, malunga neThala leLamont, yayisisipho esivela kuMongameli waseHarvard, uA. Lawrence Lowell. Namhlanje, indlu isetyenziswe ngamabhodi amabini (Abaphathi kunye neNkampani) kwiintlanganiso zabo ezisemthethweni. Imibhangqwana, iidlo zangasese kunye nemibhiyozo ekhethekileyo nayo iqhutywe kwiLoeb House.
Ukuba ungathanda ukubona imifanekiso engakumbi yeHarvard, khangela le Harvard University Photo Tour.
Funda kabanzi malunga neHarvard kunye noko kuthatha ukuthatha ukungena ngala manqaku:
Iprogram yeYunivesithi yaseHarvard
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph kwi-University of Harvard Admissions
Utywala lwe-oksijini kunye neScuba Diving
Imbali yeMabon: I-Second Harvest
I-FDR Memorial eWashington, DC
I-Basics of Physics kwiSayensi yeSifundo
À tes Souhaits - Inkcazo yesiFrentshi ichazwa